Manchester United oo ballan qaad weyn u sameysay Weeraryahankeeda Marcus Rashford – Gool FM
Manchester United oo ballan qaad weyn u sameysay Weeraryahankeeda Marcus Rashford
Haaruun March 13, 2019
(Manchester) 13 Maarso 2019. Weeraryahanka kooxda Manchester United ee Marcus Rashford ayaa lagu soo waramayaa inuu labalaabmi doono mushaarkiisa kaddib marka uu qalinka ku duugo heshiis cusub oo muddo dheer ah.
Red Devils ayaa rajeynaysa in xiddiga xulka qaranka England uu sii dheereynayo inuu sii joogo garoonka Old Trafford ka hor dhammaadka xilli ciyaareedka soo socda, taasoo ah xilliga uu ku eg yahay qandaraaskiisa.
Wakiillada Rashford ayaa wadahadallo la yeeshay Man United, sida ay warinayso Jariiradda The Mirror wada hadalladu waxay u muuqdaan kuwo si wanaagsan u socda oo horumar sameynaya.
Waxaa la sheegay in Man United ay 21-sano jirka u bandhigtay mushahar dhan 150,000 oo gini isbuuciiba kaa oo sare u kacaya illaa 200,000 oo gini.
Kooxaha Real Madrid, Paris Saint-Germain iyo Juventus ayaa dhammaantood la rumeysan yahay inay si dhow ula socdaan xaaladda Rashford, waxaana dhammaantood ay diyaar u yihiin inay suuqa xagaaga la soo wareegaan haddii aan heshiis cusub la la gaarin.
Wafdi ka socda Xiriirka Soomaaliyeed ee kubadda cagta oo maanta gaaray qaar ka mid ah Gobollada dalka
Zinedine Zidane oo Tababarkii ugu horreeyey ku hoggaamiyey Real Madrid tan iyo markii uu dib ugu soo laabtay kooxda… + SAWIRRO